Ciidamadii salaanta siiyay madaxweynaha ee watay qoryaha aysan qasnadda ku jirin. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Ciidamadii salaanta siiyay madaxweynaha ee watay qoryaha aysan qasnadda ku jirin.
Ciidamadii salaanta siiyay madaxweynaha ee watay qoryaha aysan qasnadda ku jirin.
Magaalada Dhuusamareeb ee xarunta u ah dowlad goboleedka Galmudug waxaa ku sugan madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada, ajandaha ugu weyn ee shirkoodana waa sidii la isugu waafaqi lahaa nooca ay noqoneyso doorashada qaranka.
Dhinacyada siyaasadda ayaa si weyn ugu kala aragti duwan arrimaha doorashada, iyadoo dowladda uu madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay u xusul duubeyso sidii ay dalka uga dhici lahayd doorasho qof iyo cod ah.
Laakiin walaaca ay garabyada kasoo horjeeda dowladda qabaan ayaa ah in arrintaasi ay horseeddo dib u dhac iyo muddo kororsi.
Shirka oo markii hore la qorsheynayay inuu ka dhaco magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa loo weeciyay Dhuusamareeb, halkaasoo ay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ku qanacsanaayeen.
Shacabka Soomaalida ah iyo beesha caalamka ayaa si weyn isha ugu haya natiijada kasoo bixi karta kulankaas oo looga hadli doono arrin u muuqata in dhinac walba uu ka taagan yahay mowqif aan ka laabasho lahayn.
Qormadan waxaan kusoo koobi doonnaa lix qodob oo ku saabsan kulanka Dhuusamareeb.
Baarlamaanka Federaalka oo saluugsan
Qoraalka sawirka,Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal
Madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ee Soomaaliya iyo madaxda federaalka waxay shirkooda diiradda ku saarayaan arrimo ay ugu weyn tahay doorashada dhaceysa.
Labada dhinac waxay isku hayaan inay dhacdo doorasho qof iyo cod ah ama in doorasho dadban la qabto.
Laakiin Baarlamaanka Federaalka ayaa si weyn uga soo horjeeda in gabi ahaanba qodobkaas lasoo hadal qaado.
Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa dhowr jeer ku celiyay in go’aan walba oo doorashada ku saabsan uu yahay mid uu baarlamaanka oo kaliya gaari karo.
Horay ayuu Baarlamaanka u ansixiyay sharciga doorashada, waxaana qalinka ku duugay madaxweynaha, balse siyaasiyiin badan oo ay ku jiraan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada ayaa u xusul duubaya in la baddalo sharcigaas. Waxay doonayaan in – sidii horayba ay ahaan jirtay – la qabto doorasho dadban oo aan waqtigeeda ka daba marin.
15-kii bishan July, guddoomiye Mursal ayaa baarlamaanka hortiisa ka sheegay in goluhu uusan aqbali doonin doorasho dadban.
Mursal ayaa horaantii bishan caddeeyay mowqifka uu ka taagan yahay arrintaas, wuxuuna yiri: “Waddankan amni laga heli maayo ilaa ay doorasho toos ah ka dhacdo. Waad dareemi kartaan, hadda waqtigii ugu dambeeyay – 2016-kii – odayaashii ergada iyo xildhibaannada kala shaqeynayay guddiyada doorashooyinka, inta la wacay ayaa la yiri dambi baad gasheen waana la idinka cafiyay. Marka doorasho dadban haddaan aado dhammaantiin waad dareemi kartaan waxa la filan karo. Qodobka kaas ka muhiimsan waa in markii hore uusan waddankan lahayn sharci doorasho, laakiin hadda waxaan leenahay sharci doorasho oo uu baarlamaanka ansixiyay, madaxweynahana uu saxiixay, meel ay ku qoran tahay in doorasho dadban la aadayo ma jirto.”
Soo dhaweyntii Madaxweyne Farmaajo iyo ciidamo heystay qoryo aan qansado lahayn
Qoraalka sawirka,Farmaajo ayaa Sabtigii gaaray Dhuusamareeb
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa Dhuusamareeb gaaray maalintii Sabtida, 18-kii July – halkaasoo si weyn loogu soo dhaweeyay.
Garoonka diyaaradaha waxaa madaxweynaha uga hor tagay Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khyere, oo hordhac usii ahaa, iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye “Qoor-Qoor”.
Dadweyne badan ayaa ka qeyb galay soo dhaweynta madaxweynaha, hase yeeshee arrimaha sida aadka ah loo hadal hayay waxaa ka mid ah nidaamkii ay ciidanka milatariga u qaabileen madaxweyne Farmaajo.
Askar garoonka diyaaradaha ee Dhuusamareeb salaan sharaf ku siineysay madaxweyne Farmaajo ayaa la arkayay iyagoo heysta qoryo aysan qasnado ku jirin, taasoo abuurtay hadal heyn weyn.
Qoraalka sawirka,Askartii salaan sharafta siineysay madaxweynaha ayaa heystay qoryo aysan ku jirin qasnad
Inkastoo aysan Madaxtooyada Soomaaliya si rasmi ah u caddeynin sababta, haddana marar badan oo hore ayey dhacday in ciidamo gaarsinaya ay qoryahooda ka saaraan qasnadaha.
Yaa gacanta ku haya amniga Dhuusamareeb?
Waxyaabaha kale ee toddobaadkan lagu arkay Dhuusamareeb waxaa ugu xiiso badnaa ciidamo sameeyay bandhig cajiib ah, oo la sheegay inuu qeyb ka ahaa diyaargarowga sugidda amniga goobta uu ka shacayo shirka.
Sawirrada askartan ayaa hadal heyn baaxad leh ka abuuray baraha bulshada.
Madaxda maamul goboleedyada ayaa lagu soo warramay in mid walba uu watay ciidamo u gaar ah oo amnigiisa suga.
Hase yeeshee, waxaa su’aalo badan la iska weydiinayaa cidda mas’uulka ka ah amniga magaalada iyo sida ay isula shaqeynayaan ciidamada ka kala yimid deegaannada kala duwan.
Guddoomiyaha magaalada Dhuusamareeb, Cabdiraxman Cali Geeda-Qoroow, oo BBC-da u waramay ayaa sheegay in amaanka magaalada Dhuusamareeb uu aad u wanaagsanyahay isla markaana ay gacanta ku hayaan ciidamada amniga ee maamulka Galmudug.
Balse wuxuu intaa raaciyay in ciidamada kale ee sida gaar gaarka ah u sugaya amniga madaxda ay ku suganyihiin goobo gaar ah oo loo cayimay.
“Halkan maamulka Galmudug ah ayay gogashu taallaa waxaana xagga amniga gacanta ku haya ciidamada Galmudug, askarta kale ee yimidna qolo walba goobtii loo cayimay ayay joogtaa qaabka loo wada shaqeynayo marka ay shirarku dhacayaanna si wada jir ah oo la isla ogalyahay ayaa looga wada shaqeynayaa,” ayuu yiri guddoomiye Geeda-Qoroow.
Sidoo kale ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Galmudug ayaa sugaya amniga hareeraha magaalada iyo dhamaan goobaha laga soo galo, taasi oo muhiim u ah la socodka dhaqdhaqaaqa xaaladda guud ee amniga.
Xirasho la’aanta Maaskarada
Qoraalka sawirka,Madaxda Federaalka iyo Maamul goboleedyada ayaa ka arrinsan doona nooca doorashada
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa markii uu ka dagayay diyaaraddii uu ku tagay Dhuusamareeb la arkayay isagoo iska furaya maaskaraati uu xirnaa.
Inta badan madaxdii iyo dadkii garoonka ku soo dhaweeyay ma xirneyn maaskarada, xilligan oo uu waddanka Soomaaliya si weyn uga jiro cudurka safmarka ah ee Corona.
Sawirro laga soo qaaday madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa federaalka oo kulamo hordhac ah yeelanayay ayaa muujinaya in dhammaantood aysan isticmaaleynin maaskarada afka, oo ay dhakhaatiirta si joogto ah ugu taliyaan in la isaga ilaaliyo xanuunka fidaya.
Soomaaliya ayaa ka mid ah waddamada bariga Afrika ee uu sida weyn ugu faafay corona, walina kiisas dheeraad ah laga helo.
Farmaajo iyo Axmed Madoobe oo markii ugu horreysay is hor fariistay
XIGASHADA SAWIRKA,GALMUDUG STATE HOUSE
Qoraalka sawirka,Axmed Madoobe(bidix) iyo Farmaajo ayaa markii ugu horreysay kulmay tan iyo doorashadii ugu dambeysay ee Jubbaland
Tan iyo markii ay dhacday doorashadii muranka dhalisay ee Jubbaland, madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam “Axmed Madoobe” ayaa markii ugu horreysay maanta si fool-ka-fool ah ula kulmay madaxweyne Farmaajo.
Labada mas’uul ayaa yeeshay shir ay albaabbada u xirnaayeen, waxaana inuu kulankooda hirgalo gacan ka geystay Ra’iisul Wasaare Kheyre iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye “Qoor-Qoor”.
Ma jirin war-saxaafadeed kasoo baxay shirkooda, balse agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Jubbaland, Maxamed Axmed Sabriye, ayaa sheegay in kulanka maanta uu gogol xaar u yahay wadahadallo lagu xalinayo khilaafka labada dhinac u dhaxeeya.
Qoraal uu agaasimaha soo dhigay bartiisa facebook ayuu ku yiri: “”Kulankan ayaa ku koobnaa salaan iyo is arag gogol xaar u ah wadahadallada qorsheysan ee lagu xallinayo khilaafka muddada soo jiitamayey ee Doweladda Federaalka Soomaaliya iyo Jubbaland.”
Yididiilada ku aaddan in meel qura la isku raaco
Qoraalka sawirka,Madaxda shanta maamul goboleed ee federaalka Soomaaliya
Kulan hordhac u ah shirka xasaasiga ah ee ay yeelanayaan madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada ayaa maanta qabsoomay, waxaana shir guddoomiyay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Khyere ayaa goob joog ka ahaa kulankaas oo ay ka qeyb galeen madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye, madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Koonfur-galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed iyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan.
Guddiga doorashada ee Soomaaliya ayaa horay u sheegay in doorasho qof iyo cod ah ay u baahan tahay waqti ka dib maraya xilligii loogu talagalay inay shaqada hayaan dowladda iyo baarlamaanka hadda jira. Madaxtooyada iyo golaha wasiirrada ayaa isku raacay in aan la sameyn doonin wax muddo kororsi ah, taasina waxay horseedi kartaa yididiilo ah in madaxda ku shirsan Dhuusamareeb ay mowqif mideysan ka gaaraan sida ay doorasho aan waqtigeeda dhaafin ku dhici karto.
Laakiin ma jirto cid saadaalin karta sida ay dhinacyada isugu afgaran karaan doorasho dadban iyo qaabka loo qabanayo.
Previous articleShiarka ka socda dhuusamareeb iyo Villa Somaliya oo meesha ka saartay Riyadii ahayd Doorasho Qof iyo Cod ah
Next articleShirkii Maanta ee magaalada Dhuusamareeb oo Dib u dhac ku Yimid
Farmaajo oo waan waan ka dhex bilaabay Maamul Goboleydyada